Iakhawunti yakho yeKhaphethi yeKhaphethi iya kwiNtsholongwane ngaphakathi kweentsuku | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Instagram iye yaba yintanethi yenethiwekhi apho ukufotowa, kunye nevidiyo, ngowona mlinganiswa uphambili eshiya owesibini kwindiza yesibini. Kukho izigidi zeefoto ekwabelwana ngazo kwaye zapapashwa kule nethiwekhi yentlalo ekwaziyo ukwandisa ngokucacileyo abasebenzisi bayo ukusukela oko yongezwa kumabali e-Instagram njengento enqabileyo.
Akukho lula ukufumana i-horde yabalandeli kwi-Instagram, nangona kunjalo UBill Young, utata kunye nomqhubi wenqwelomoya, ukwazile ukufumana abalandeli abayi-500 lamawaka ngeveki ngokuthatha imifanekiso yazo zonke iintlobo zemibhoxo ozifumana kwiihotele ozindwendwelayo. Umntu obesoloko enomdla wokufota kwaye ekwazile ukumangalisa abantu bendawo kunye nabantu angabaziyo ngokufikelela kwinani labasebenzisi ngexesha elifutshane.
Ukusuka Iipateni zeentyatyambo ezivela eNagoya Marriott Associa Hotel eJapan ukuya kwiipaseji zekasidoskophu yeChoctaw Casino, nganye yeefolda ezimelwe kwiifoto zazo kwi-Instagram ziyakwazi ukuthelekisa incasa yobuqu yomnye wabasebenzisi abebelandela lo mqhubi wenqwelomoya.
Ibali livela kumfanekiso wakhe wokuqala awapapasha ngo-Agasti 27, 2015 ngeakhawunti @myhotelcarpet. Ukusukela ngoko ufumene malunga nabalandeli abangama-83. Kodwa Yonke into yatshintsha xa intombi yakhe eneminyaka eli-19 egama linguJill wabelane ngeakhawunti kayise kwi-Twitter. Ucele uncedo lwenethiwekhi ngalo myalezo: "Into endiyifunayo ngeKrisimesi kukuba ikhaphethi katata ka-Instagram iye kwintsholongwane, nceda uncede yenzeke lento."
Kwiintsuku nje ezimbalwa, iakhawunti ka-Young ka-Instagram yaqhuma yangena kwintsholongwane, ukuze Kuye kwafuneka ndibeke ifowuni kwimowudi yenqwelomoya malunga nokuqhuma kwezaziso ezininzi ezize kuye. Namhlanje inabalandeli abangama-614.000 abangabathandi beerug.
Nantsi eyakho Iakhawunti ye-Instagram. Ayisiyo eyokuqala ukubonisa izinto eziqhelekileyo kubo bonke, njengoko kwenzekile ngalo mzobi ngubani ukufota inani elininzi leminyango.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Thatha iifoto zemigangatho yeehotele kwihlabathi liphela kwaye ufumane abalandeli abangama-500 kwiveki enye